Home News Booliska kenya oo fal aad loogu xumaaday ka geeystay Magaalada Mandheera!!
Booliska kenya oo fal aad loogu xumaaday ka geeystay Magaalada Mandheera!!
Warbaahinta dalka Kenya ayaa xaqiijisay in ciidanka Booliska Dalka Kenya ayaa Magaalada Mandheera ku toogteen Haweeney da’ ahayd oo ka mid ahayd dadka degaanka, ka dib markii ay shakiyeenn.
Ciidanka dilay Haweynda oo aheyd 62 labo jir ayaa la sheegay in la diiday in lasoo qabto si Caddaaladda loo marsiiyo,ayna diideen Ciidanka Booliska degmada Mandera.
Haweeneydan ayaa waxaa toogtay sarkaal ka mid ah Booliska,waxaana dilkeeda kaddib dadka degaanka ay sameeyeen rabashado iyaga oo Taliska Booliska iyo maamulka Mandheera ka codsaday in sarkaalka dilka geystay sharciga la horkeeno.
Sidda ay xaqiijiyeen qaar ka mid ah dadka degaanka dilka ayaa ka dhacay xaafadda Rhama ee Magaalada, xilli Ciidanka Booliska ay ku jireen howlgal.
Guddoomiyaha urur u dhaq dhaqaaqa dadka degaanka ayaa dacwad oogaha guud u gudbiyay dacwad ka dhan ah Booliska Kenya oo uu ku eedeeyay in ay si joogta ah oo sharci darro ah u laayaan dadka Gobolka Soomaalida